Aabaha dhalay Lionel Messi oo ku wargaliyay Paris Saint-Germain halka uu u dhaqaaqayo wiilkiisa. - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Aabaha dhalay Lionel Messi oo ku wargaliyay Paris Saint-Germain halka uu u...
Aabaha dhalay Lionel Messi oo ku wargaliyay Paris Saint-Germain halka uu u dhaqaaqayo wiilkiisa.
Lionel Messi aabihiis ayaa lagu soo waramayaa inuu ku wargaliyay Paris Saint-Germain in wiilkiisa uu doonayo inuu ka tago Barcelona kuna biiro Manchester City inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
33 jirkaan ayaa la rumeysan yahay inuu codsaday inuu kulan rasmi ah la yeesho Barca maalmaha soo socda isagoo doonaya inuu ka tago Camp Nou suuqa haatan.
Man City iyo PSG ayaa loo arkaa kuwa ugu cadcad ee la saxiixan kara ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Argentina marka laga hadlayo awooda dhaqaalaha.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay L’Equipe, Messi aabihiis Jorge ayaa u sheegay agaasimaha isboortiga PSG Leonardo intii lagu jiray wicitaankii ugu dambeeyay ee taleefanka in wiilkiisa uu doonayo inuu u dhaqaaqo Etihad Stadium.
Heshiiska ayaa la sheegay inuu ku kacayo £ 500m sababo la xiriira mushaharka xididga oo badan, halka Barca ay u badan tahay inaysan ku iibin doonin xiddigooda wax ka yar 200 milyan ginni inkastoo qandaraaskiisa uu dhacayo xagaaga soo socda.
Muwaadiniinta ayaa la sheegayaa inay diyaar u yihiin inay ku daraan Eric Garcia qeyb ka mid ah dalabka Messi laakiin ma bixin doonaan Gabriel Jesus, Bernardo Silva ama Riyad Mahrez midkood.
Previous articleKulanka Baarlamaanka Galmudug oo furmay iyo qodobada looga hadlaayo
Next articleDHAGEYSO: Warka Duhur 29-8-2020